पद र पैसामा भुलेर कम्युनिष्टको उद्देश्य पूरा नहुने
नेपालका राजनीतिक दलहरू धेरै पटक फुटे, जुटे, दलभित्र गुट उपगुट देखिए। दलभित्र फुट्नु र जुट्नु तथा गुट उपगुट देखिनुको कारण देश विकास गर्न, देशमा परिवर्तन ल्याउन र बनेको संविधान लागू गर्न होइन। फुटेका, जुटेका र गुट उपगुटमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ पद पाउन, उम्मेदवारी बन्न, नेतृत्वको तहमा बसेर व्यक्तिगत लाभ पाउन हो। छिनछिनमा दल बदल्ने, विचार फेर्ने दलका नेताहरू ठूला दलले सबथोक गर्नसक्छन्, ठाउँमा पुग्न पाउँछन्, पदको दुरूपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन पाउँछन् भन्ने मान्यता राख्छन्। नयाँ दलमा लागेको ६/७ महिना या वर्ष दिन नपुग्दै नयाँ दल छोडेर पुरानै दलमा फर्कनेहरू सिद्धान्त र विचारको ख्याल गर्दैनन्।
पूँजीवादी पार्टीका नेताहरूले पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर कम्युनिष्ट भनिने दलका नेताहरू पनि पूँजीवादी र सामन्ती चरित्रका नेताहरूजस्तै पद र पैसाको राजनीतिमा भुलेका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीले कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम भइरहेको छ, छैन, तिनीहरूलाई मतलब छैन। दल ठूलो बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी भएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी भनेर किन खोल्नुपर्‍यो? कम्युनिष्टको खोल ओढेर जनताको मत किन लिनुपर्‍यो? कम्युनिष्ट पार्टीको खोल ओढेर कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार उल्लङ्घन गर्नु के जनतामाथिको विश्वासघात होइन? के यो कम्युनिष्ट सिद्धान्तविपरीत अघि बढेको होइन?
कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो दलको पथ प्रदर्शक मानिन्छ तर मार्क्सवाद र लेनिनवादबारे जनतालाई सुसूचित गरिंदैन। अरू बेला त के पार्टीको महाधिवेशन र सम्मेलनमा समेत कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारबारे बहस गरिंदैन, नेता तथा कार्यकर्तालाई सुसूचित पारिंदैन। असोज २ गते हुन गइरहेको प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट भनिने ठूला दलले सिद्धान्त र विचारको प्रचार नगरी एकले अर्काेलाई आरोप प्रत्यारोप गरे। जसरी भए पनि निर्वाचनमा जित्न ती दलले आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा सिद्धान्त र विचारको कुरा नउठाइ खालि हराउने र जित्ने कुरा गरेर जनता कसरी सङ्गठित बन्छन्, सचेत हुन्छन् र आमूल परिवर्तनमा सहयोग पुग्छन्? आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, राज्यको सेवा र सुविधा पाउन सरकारमा सहभागी हुने दलको स्वार्थले गर्दा नेपालको राजनीतिमा खिया लागेको छ, दलको राजनीतिले गलत मोड लिएको छ। यो देशको चिन्ताको विषय बनेको छ। देशका सबै कम्युनिष्टहरू समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने हो, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको पाइँदैन। यसरी सत्तामुखी राजनीतिमा हामफालेर देशमा कम्युनिष्टको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ र बहुमत जनताको सेवा गर्न सकिन्छ ?